Samsung dia mety hahazo tatitra momba ny fipoahana diso an'ny Galaxy Note 7 | Androidsis
Samsung dia mety hahazo tatitra momba ny fipoahana diso an'ny Galaxy Note 7
Raha eo am-piomanana tanteraka ny programa fanoloana ny Galaxy Note 7 izay tratry ny olan'ny bateria dia toa nitatitra ny mpanjifa sasany fa tranga farany nivadika ho diso.
Araka ny tatitra nataon'ny ZDNet, Samsung dia nahazo tatitra tsy marina 26 amin'ireo singa Galaxy Note 7 marobe izay nirehitra hatramin'ny nanombohan'ny fisintonana ireo terminal.
1 Manararaotra ny fahantrana Galaxy Note 7
1.1 Tantara telo tsirairay
2 Ny programa fanoloana Galaxy Note 7
Manararaotra ny fahantrana Galaxy Note 7
Ny tatitra navoakan'i ZDNet manondro fa 12 amin'ireo tranga 26 ireo dia notaterina niorina tamin'ny fitaovana tsy nanana olana. Ny fito hafa dia mifanitsy amin'ireo mpanjifa izay tsy voahitsy raha ny tranga fito ambiny dia avy amin'ny mpanjifa nanafoana ny fanoloana taorian'ny nitaterany ny loza. Ny sasany tamin'izy ireo aza dia nilaza fa nariany ilay fitaovana.
Ny niandohan'ireto 26 heverina ho diso ireto dia niparitaka nanerana an'izao tontolo izao. Ny ankamaroan'izy ireo, sivy manokana, dia avy any Etazonia. Ny telo amin'izy ireo dia notaterina tany Korea Atsimo ary ny roa tany Frantsa. Mandritra izany fotoana izany, tany amin'ny Fanjakana Mitambatra, Kanada, Singapore, Filipina, Torkia, Vietnam, Kroasia, Romania, Irak, Libanona, ny Emira Arabo Mitambatra ary ny Repoblika Tseky dia nanolotra tranga tany amin'ireo firenena tsirairay ireo izy ireo.
Tantara telo tsirairay
Manasongadina tantara telo ihany koa ny tatitra. Ilay voalohany dia nitantara ny fomba nifandraisan'ny mpiasa iray avy amin'ny magazay koreana an'ny Samsung an-tserasera nilaza fa nanararaotra azy ilay fitaovana. Aoriana, tsy hita io olona io.
Iray amin'ireo tantara nasongadin'ny tatitra ZDNet ireo dia nitranga tany Singapaoro. Tao, nametraka fitoriana ny mpanjifa iray vokatry ny Galaxy Note 7 izay voalaza fa may. Saingy, io olona io dia tsy afaka nanome porofo tamin'ny fanambarana nataony satria, raha ny filazany, natsipiny teo am-baravarankely ny fiarany indray mandeha dia tototry ny lelafo (ilay terminal).
Ny ampahatelon'ireto tantaran'ny fahatokisana azo antoka ireto dia nitranga tany Canada. Any amin'ny firenena manodidina an'i Dadatoa Sam, mpiasa iray Niezaka namitaka ny orinasa aho. Raha ny fahitana azy dia hitany tamin'ny alàlan'ny Internet ny sarin'ny Galaxy Note 7 nipoaka sy may. Na fohy na kamo, dia nampiasa ity sary ity ilay olona mba hametrahana fitoriana amin'i Samsung, nilaza fa ny fitaovany.
Ny programa fanoloana Galaxy Note 7
Taorian'ny nanontanian'ny komisiona momba ny fiarovana ny vokatra ho an'ny mpanjifa (CPSC) any Etazonia ny fomba nitondran'i Samsung ny olan'ny bateria an'ny Galaxy Note 7, ary taorian'ity rafitra ity sy ny Federal Aviation Administration (FAA) faniriana ny mpampiasa mba hamono, tsy handoa vola ary tsy hampiasa ny fitaovany, na hanamarina azy ireo ho toy ny valizy amin'ny sidina, farany natomboka ny programa fanoloana izay, angamba haingana loatra, dia efa nambaran'ny orinasa Koreana Tatsimo teo aloha.
Fantatsika ny fanambarana an'ny Federal Aviation Administration momba ny Galaxy Note 7. Ny fiarovana sy ny fandriam-pahaleman'ny saina no laharam-pahamehana indrindra. Mikasa ny hanafaingana ny fandefasana Galaxy Note 7 vaovao izahay manomboka amin'ity herinandro ity mba hanamaivanana ny olana ara-piarovana sy hampihenana ny fahasahiranana ho an'ny mpanjifanay.
Ny zava-drehetra dia manondro fa Samsung dia nanao izay ezaka rehetra hamahana ity krizy ity faran'izay haingana, na dia mbola tsy hita aza ny vokany raha vao nosoloina ny terminal ary averina ny varotra.
Telo andro lasa izay, Samsung dia nanamafy izany Ny singa antsasaky ny tapitrisa tsy voakitika amin'ny Galaxy Note 7 dia efa nozaraina tamin'ireo magazay fivarotana any Etazoniatoy ny Best Buy hanomboka zaraina alohan'ny fe-potoana farany napetrak'ilay orinasa ho fe-potoana farany, 21 septambra.
Ny mpanjifa ihany no tokony mankanesa any amin'ny fivarotana misy fitaovana fanoloana misy ary ny fanovana dia hatao eo no ho eo. Safidy iray hafa ny fitantanana ny fifanakalozana amin'ny alàlan'ny programa Samsung ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung dia mety hahazo tatitra momba ny fipoahana diso an'ny Galaxy Note 7
Azonao atao izao ny misintona ny Google Allo avy amin'ny Google Play Store